Scoutsee: manaova tombony ny haino aman-jery sosialy miaraka amin'ny fivarotam-boky Affiliate | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 4, 2016 Douglas Karr
Skoto is fitaovana finday iray ahafahan'ny tsirairay mahazo vola amin'ny fampiroboroboana ny vokatra tiany sy ampiasainy isan'andro amin'ny Instagram, Facebook ary Twitter. Ny metodolojika ao ambadiky ny lampihazo dia milay tokoa. Amboary ny fivarotanao manokana amin'ny Scoutsee, ampio ny vokatrao, ary avy eo ny fampiharana finday dia ahafahanao mizara fanavaozana an'ireo vokatra ireo miaraka amin'ny URL fohy amin'ny vokatra ao amin'ny magazinao. Raha misy vokatra novidiana tamin'ny alàlan'ny paositra dia mahazo komisiona amin'ny varotra ny mpampiasa Scoutsee, matetika eo anelanelan'ny enina ka hatramin'ny folo isan-jaton'ny vidin'ny fividianana.
Lasibatra avokoa ireo mitarika amin'ny tambajotra sosialy tambajotra influencer ary olona afovoany hafa hanao varotra varotra amin'ny fampiroboroboana ny marika. Scoutsee dia ahafahan'ny influencer an-tapitrisany ao amin'ny Instagram hanamora ny fifanakalozana ataon'izy ireo manokana, na amin'ny marika manokana na mivantana. Ao amin'ny Instagram, misy mpampiasa mihoatra ny enina tapitrisa misy mpanaraka 10,000 mahery. Tom Kwon, mpiara-manorina sy CEO an'ny Scoutsee.
Ny scoutsee dia misy:
Instagram azo vidiana - Tohizo ny fizarana izay tianao ao amin'ny Instagram ary safidio izay tianao hividianana entana. Ny sary sy ny vokatra ao amin'ny Instagram dia mandroaka ny mpanaraka ny fivarotan'ireo mpampiasa Scoutsee ny vokatra voatahiry, izay samy manana rohy mivantana hividianana. Rehefa vita ny fividianana dia afindra amin'ny kaonty PayPal na kaonty banky an'ny mpampiasa Scoutsee.
Toeram-pivarotana manokana - Miorina mora foana ary mampiroborobo ireo vokatra tianao sy ampiasainao isan'andro.
Vokatra an-tapitrisany - Misafidiana vokatra avy amina marika an'arivony ary rohy mora foana amin'ny paositra sosialinao. Ny katalaogin'ny vokatra Scoutsee dia misy marika maherin'ny 8,000, ao anatin'izany ny Amazon.com, Rakuten ary EBay, miaraka amina vokatra an-jatony tapitrisa amin'ny sokajy rehetra.
Dashboard amin'ny fotoana tena izy - Jereo sy hadihadio ny hafatra nalefanao sy ny fizotran'ny fivarotana anao
Ampidino ny Scoutsee App!
Skoto miasa miaraka amin'ny marika sy maso ivoho hamolavola fonosana fanentanana ho an'ny fandraisana mpiasa Skoto ary manome dashboard ho fanarahana ny zava-bita.
Scoutsee dia notsapaina tamin'ny beta ary mikasa ny hanao ny fiaraha-miombon'antoka amin'i Spartan Race, orinasa mpifaninana vato misakana lehibe manerantany. Spartan Race dia nanararaotra ny vondrom-piarahamonin'izy io izay nampiroborobo ny hetsika sy ny vokatra azo avy amin'ny fiainana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra navoakan'i Scoutsee tao amin'ny Instagram ho an'ireo mpanaraka azy ireo. Ny tsindrio ny taha dia nahita fiakarana indroa indroa ary ny fiovam-po dia mihoatra ny fenitry ny indostria.
Tags: dashboard afilianaAffiliate-barotratambajotram-pifandraisanafivarotam-baravarankelyAmazonEbaymarketing marketingInstagramFiantsenana instagramrakutenscoutseeinstagram miovaovahaino aman-jery sosialy marketingtom kwon
Flurry: Analytics amin'ny fotoana tena izy ho an'ny fampiharana finday
16 Aogositra 2016 amin'ny 7:07 PM
Douglas, tena milay ity! Tsy mbola nahare an'io aho taloha fa tena hijery izany. Misaotra ny fizarana!